Halle Berry ayaa shaaca ka qaaday sida ay u egtahay dhabarkeeda dhabarku | Tattoo
Atariishada Halle Berry ayaa dhabarka ugu soo bandhigtay tattoo cusub
Antonio FDez | | Tattoos Caan ah, Tattoos dhabarka
Aktarka Halle Berry waa bilowga. Farshaxaniistaha caanka ah ee ku guuleystey Oscar ayaa isbedel ku sameeyey shabakadaha bulshada ka dib markii uu ku dhajiyey sawir baraha rasmiga ah ee 'Instagram' oo muujinaya iyada oo dhamaan quruxdeeda. Tattoo cusub. Taasi waa sax, Aktarada ayaa sameysay Tattoo muhiim ah, sida lagu arki karo sawirada la socda qodobkaan, waxay ku socotaa dhabarkeeda.
Halle Berry waxay rabtay inay la wadaagto tattoo-ga cusub dhamaan taageerayaasheeda dhabarkiisa ayaa hoos mara. In kasta oo atariishada aysan bixin faahfaahin badan marka lagu daro soo bandhigida sida jirkeedu u eg yahay tatoobadan weyn, waan ku qaddarin karnaa inay tahay geed canab ah. Taageerayaal badan ayaa ku muujiyey shabakadaha bulshada in tattoo uu la xiriiro kii dhawaan ay sameysay Lady Gaga.
Yaa dhahaya ma ihi meherad?‍♀️
Fariin ay wadaagaan Halle Berry (@halleberry) dusha Mar 4, 2019 at 10: 27am PST
Fanaanadu waxay samaysay soobax aad u weyn oo waliba lafdhabarta hoos mara. Runtu waxay tahay in nashqaduhu gebi ahaanba ka duwan yihiin, in kasta oo lagu sameeyo isla meel jidhka ah. Waqti badan ayaa laga joogaa tan iyo Tattoo lafdhabarta waxay noqdeen kuwa caan ah oo waxay noqdeen isbeddel. Si kastaba ha noqotee, waayadan dambe waxay kujiraan jahwareer, gaar ahaan dhagaystayaasha dhallinta yar, maadaama ay u horseedi karaan cillado caafimaad qaarkood.
Iyo muxuu macnaheedu yahay tattoo cusub ee Halle Berry? Runta ayaa ah in atariishada aysan wax faahfaahin ah ka bixin arinkaas. Waxay ku egtahay kuwa soo socda: "Yuu dhahaa ma ahi meeris?". Sidii caadada u ahayd kiisaskan, waxay noqon doontaa macno shaqsiyadeed oo kaliya oo la ogaan doono in yar. Adigana adigu, maxaad ka fakartay tattoo cusub ee Halle Berry? Miyaad tabin lahayd aagga lafdhabarta? Nala wadaag
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoos Caan ah » Atariishada Halle Berry ayaa dhabarka ugu soo bandhigtay tattoo cusub
Isku-darka tattoo Rudder iyo sharaxaadda macnihiisa
Tattoo koofiyadaha mootada, jacaylka laba taayir